Mesut Özil oo si adag ugu jawaabay in laga saaray liiska xiddigaha Arsenal ugu qeyb galaya Premier League – Gool FM
(London) 21 Okt 2020. Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday liiska magacyada ciyaartoydeeda ee ka qayb qaadan doona horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2020/2021 kaddib dhamaadka suuqii xagaaga.
Liiska xiddigaha uu ku dhawaaqay Tababare Mikel Arteta ayaan lagu arkin magaca laacibka reer Germany ee Mesut Özil, kaasoo isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah laba sano ka hor, kaddib markii laga reebay liiska koobkii adduunka Russia ee 2018.
Warbaahinta Ingariiska ayaa soo warisay in go’aanka looga reebay Mesut Özil liiska xiddigaha kooxda Arsenal ay tahay tallaabo farsamo oo ka timid tababaraha reer Spain ee Mikel Arteta.
Kaddib markii ay Arsenal shalay ka reebtay liiska xiddigaha kaga qeybgalaya horyaalka Premier League iyo tartanka Europa Leaguec xilli ciyaareedkan 2020/2021, xiddigan khadka dhexe ayaa maanta arintaas ka hadlay, wuxuuna Özil xaqiijiyay inuusan mustaqbal ku laheyn Emirates.
“Fariintan waa fariin ay adag tahay inaan u qoro jamaahiirta Arsenal oo aan u ciyaarayay sanadihii u dambeeyay, xaqiiqdii si weyn ayaan uga niyadjabsanahay inaan xilli ciyaareedkan la iga diiwaangalinin Premier League”.
“Sanadkii 2018 markii aan saxiixay heshiiskeyga cusub waxaan balan qaaday inaan daacad u noqonayo isla markaana aan u heelanahay kooxda aan jeclahay ee Arsenal, waa ay i murug galineysaa inaan daacadnimadaas la ii muujinin maadaama aan haatan ogahay inay adag tahay in maalmahaan daacad leysku noqo”.
“Waxaan isku dayay inaan mar walba niyad sami muujiyo todobaadba toddobaadka ku xiga, anigoo aaminsanaa inaan mardhow kooxda ku soo laabanayo, waana sababta aan ilaa iyo haatan u aamusnaa”.
“Ka hor Korona Feyras aad ayaan ugu faraxsanaa horumarka aan sameynayay anigoo ka hoos ciyaarayay macalinkeena cusub ee Mikel Arteta, meel fiican ayaan u soconayay qaab ciyaareedkeygana aad ayuu u fiicnaa, laakiin kaddib waxbaa isbadelay markale, mana la ii ogolaanin inaan kubadda cagta u ciyaaro Arsenal”.
“Maxaan kale oo aan dhihi karaa? Waxaan dareemayaa in magaalada London ay tahay gurigeyga oo kale, saaxiibo fiican oo badan ayaan ku leeyahay kooxda, xiriir xoogan ayaana la leeyahay jamaahiirta kooxda”.
“Wax waliba oo dhaca waxaan u sii dagaalami doonaa fursadeyda mana doonayo in xilli ciyaareedka saddedaad uu sidaan ku dhamaado”.
“Waxaan idin balan qaadi karaa in go’aankan adag uusan waxba ka badali doonin maankeyga waana sii wadan doonaa tababarka, markasta oo ii suuragashana waxaan codkeyga u isticmaali doonaa inaan kaga soo horjeysto gumaadka bini’aadam-nimo, isla markaana aan ku taageero cadaalada”.
Waxaa qoraalkaas dheer ku saxiixnaa Mesut Özil, wuxuuna soo dhigay barihiisa xiriirka bulshada.